Dowladda Hoose ee Muqdisho oo bilaabeeysa hirgelinta mashruuca soo kabashada dhismaha Muqdisho | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Dowladda Hoose ee Muqdisho oo bilaabeeysa hirgelinta mashruuca soo kabashada dhismaha Muqdisho
Dowladda Hoose ee Muqdisho oo bilaabeeysa hirgelinta mashruuca soo kabashada dhismaha Muqdisho
Muqdisho(SNTV);- Dawladda Hoose ee Muqdisho waxay bilaabi doontaa hirgelinta Mashruuca soo Kabashada Magaalada Muqdisho Toddobaadyada soo socda. Mashruucan waxaa ka mid ahaan doona dhisida Wado Xaafadeedka ee degmadaada. Saa’ aawadeed ka qaybqaadashadaada mashruucani aad ayay muhiim u tahay.
Marka laga reebo dhismaha waddooyinka kasokow, sidoo kale Mashruucan waxaa loogu talagalay inuu u abuuro shaqooyin bulshada ku dhaqan degaanka.
Dawladda Hoose waxay ku dadaali doontaa in dhismaha waddooyinkaasi ay ku yeeshaan saamaynta ugu yar nolosha dadka ku nool degaanlkaas.
Dawladda Hoose ee Muqdisho waxay diyaarisay dokumeenti siinaya macluumaad aad u qoto dheer oo ku saabsan sida uu mashruucan u saameyn karto dadka deggan degmada.Qoraalka Dukumeentiga oo dhan waxaa laga heli karaa dhamaan xarumaha degmooyinka, waliba waxaad heli kartaa asagooo ku tarjuman
Ka hor inta aysan bilaabin dhisida Jidadkan, Gudi ka kooban dadka degaanka oo ay ka mid yihiin Odayaasha, Dadka Degaanka, Wakiilada Beelaha, iyo Saraakiisha Degmada ayaa la samayn doonaa, si wax looga qabto arrimaha dadka degaanka ee ku saabsan mashruuca.
Dawlada Hoose waxay dooneysaa in ay samayso tirakoob dhammaan waddooyinka la dhisi doono todobaadyada soo socda. Dawlada hoose waxay caawinaysaa dadka uu saameeyo mashruucan.
Guddi ayaa loo dhisi doonaa si wax looga qabto cabashooyinka iyo sidii loo heli lahaa siyaabo kale oo lagu xaliyo cabashooyinka si cadaalad ah iyo hab maamuus wanaagsan.
Lifaaqa Hoose ka Akhriso Warbixinta Mashaariicda oo faah faahsan:-
Previous articleGuddoomiye yariisoow oo qaabbilay Safiirka Turkiga ee Soomaaliya
Next articleMachadka Isgaarsiinta Qaranka oo dib loo hawlgeliyay